Hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, shan qof kale waa dhaawacmeen werar lagu qaaday gaari rakaab ah – STAR FM SOMALIA
Ugu yaraan hal ruux ayaa geeriyooday shan kale waa ay dhaawacmeenm kadib markii rag ku labisan dareyska ciidamada ay gaari rakaab ah ku rasaaseeyeen duleedka degmada Warsheekh ee Gobolka Sh/Dhexe.
Guddoomiye kuxigeenka dhinaca amniga ee degmada Warsheekh Muriidi Xasan Gurey ayaa sheegay in kooxaha rasaaseeyay gaariga ay labisnaayeen dharka ciidamada, gaar ahaan kuwa milateriga.
“Hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay, shan qof kale waa dhaawacmeen, gaari waxaa rasaaseeyay kooxo hubeysan oo dharka ciidamada labisnaa”ayuu yiri Guddoomiye kuxigeenka dhinaca amniga degmada Warsheekh oo sheegay in gaariga uu ka ambabaxay Warsheekh.
Waxaa uu sheegay in degmada Warsheekh ay ku sugan yihiin maleeshiyooyin aanay cidna ka amar qaadan, waxaana uu xusay in maamulka uu tallaabo ka qaadi doono.
Dadkii ku dhaawacmay rasaasta ayaa loo soo qaaday isbitaalada Muqdisho, waxaana maamulka Warsheekh uu sheegay inuu baadigoobayo kooxihii falkaas ka dambeeyay.